Sombin-kazo metaly mora volo polishing faritra orinasa sy mpamatsy | Ouzhan
Ny ampahany metaly amin'ny takelaka dia misy ny famolahana sy ny famolahana. Ny famolavolana dia mampiasa haino aman-jery fikorontanana toa ny taratasy fasika, pumice ary vovoka vato madinidinika mba hikosehana ny ambonin'ilay zavatra mifono na sarimihetsika sarona. Ny famolavolana dia mampiasa effets mekanika, simika na electrochemical hampihenana ny fahamendrehan'ny workpiece hahazoana fahazavana. Ny fomba fanodinana ny faritra fisaka.
Namboarina tamin'ny fanamafisam-peo sy ny fikosoham-bolo vy-mazava tsara taratasy fanamafisam-peo sy ny fikosoham-bolo fikarakarana faritra
Ny metaly takelaka dia vokatra narovan'ny teknolojia vy. Tsy afaka manao tsy misy vy vy na aiza na aiza amin'ny fiainantsika isika. Ny metaly metaly dia amin'ny alàlan'ny fanodikodinam-pahefana filament, fanapahana laser, fanodinana mavesatra, fatorana vy, sary metaly, fanapahana plasma, ary welding mazava. Famolavolana, famolahana vy vita amin'ny vy, famonoana maty, fanapahana jet jet, fanamafisam-peo. Ny metaly takelaka dia faritana toy ny: ny metaly takelaka dia dingana miasa mangatsiaka feno ho an'ny ravina vy (matetika ambanin'ny 6mm), ao anatin'izany ny fanetezana, ny famelezana / ny fanapahana / ny fitambarana, ny fametahana, ny famafazana, ny riveting, ny fizarana ary ny fananganana (toy ny vatan'ny fiara). Ny mampiavaka azy dia ny hatevin'ny akanjo itovizany. Ny vokatra metaly takelaka dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny tanjaka avo, ny fitondra herinaratra, ny vidiny ambany ary ny fahombiazan'ny famokarana betsaka. Manana fampiasa betsaka izy ireo.
Ny fanodinana vy vita amin'ny takelaka dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny elektronika, ny fifandraisana, ny indostrian'ny fiara ary ny fitaovana fitsaboana. Ohatra, amin'ny tranga solosaina, telefaona finday, ary MP3, ampahany lehibe ny metal sheet. Ho fanampin'izany, ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana ara-pitsaboana izy io, ary ampiasaina amin'ny vatan'ny fiara sy kamio (kamio), fiaramanidina fiaramanidina sy elatra, latabatra fitsaboana, tafo fananganana (fanamboarana) ary fampiharana maro hafa.
Tombontsoa amin'ny fantsom-by miloko metaly any Shanghai Ouzhan sy ireo faritra mandeha ho azy
Namboarina manokana vy milina poloney faritra
Material Takelaka mangatsiaka, ravina vita amin'ny vy, vy tsy misy fangarony, firaka aliminioma sy aliminioma madio, firaka varahina sy varahina madio, haitao fanodinana vy tsy misy fangarony
Fitsaboana ambonin'ny tany Araka ny toetra mampiavaka ny akora sy ny takian'ny mpanjifa, ny fitsaboana amin'ny tany dia tanterahina hahazoana vokatra tsara sy maharitra.
Dingana lehibe Famolahana vy sy fikosoham-bary
Previous: Famehezana vy vy
Manaraka: Sombin-vy vy nohomboina